Ibhranti iphosa ikamva eliqaqambileyo ngonaphakade endleleni
Ngo-2005, Yiwu Yitian technology co., Ltd. yasekwa e Yiwu, kwiphondo Zhejiang, nto leyo iziko lonikezelo lwehlabathi amashishini amancinci. Ngophuhliso lweshishini, i-Yiwu Leixin yorhwebo co., Ltd. Inkampani yasekwa ngokusesikweni ngo-2017. Ukusukela oko yasekwayo, ihlala ithobela umgca wophawu lwentengiso, izama ukwakha inkqubo ngokuhambelana nokusinda kwayo kunye nophuhliso, yomeleza ulawulo lwangaphakathi ngokungqongqo, ukwanda kwamazwe angaphandle kuphucula imigangatho yenkonzo, kunye nokuba nesixhobo esiphathwayo umenzi abahlobo abalishumi bezenzululwazi kunye netekhnoloji iimvakalelo zokwenene zokuthembana eziziswa lula kunye nezibonelelo, eziza kukhetha umenzi wesixhobo esiphathwayo izixhobo zeetekhnoloji ze-e-ten ezinikezwe ngumtsalane wexabiso lophawu kunye nexabiso.
Iminyaka yokulwa kusukelwa rhoqo kwenkqubela phambili kwaye igqibelele ngaxeshanye, rhoqo ukudibanisa ishishini elikhoyo lokuthumela ngaphandle kwezincedisi zefowuni ephathekayo, ukwandisa ifom eyahlukeneyo yeshishini, ukuyila inkampani bonke abasebenzi kunye nabathengi bethu kwivenkile yesandla egcinwe kubuchwephesha beshumi ngoku ngesandla kunye nenkqubela phambili iyonke kwixa elizayo, ukuxhamla iqonga elivulekileyo, vumela umenzi wesixhobo esiphathwayo e-ten isiphumo sokuphuhliswa kwesayensi kunye netekhnoloji inokuba nengxelo engcono kubahlobo bethu abatsha nabadala.
Iimveliso zeefowuni eziphathwayo ziyahambelana kakhulu, zigubungela ngaphezulu kwe-90% yeemveliso zedijithali ezivenkileni, kwaye zinokusetyenziswa kwesi sixhobo. Siyisombulule indawo yenimba yeshishini, akukho sandi sangoku, uzinzo alunamathele. Ukusebenza okulula kunye nolawulo olukrelekrele.
Umculo bubugcisa obungenamda, obunentloko, kude nengxolo yehlabathi, buthule kumculo wam. Uthando lomculo, unganikeli imbeko kwiklasikhi kuphela, kodwa uthande nesandi esinyulu sefowuni
Ukongeza, imeko yethu yokukhusela ifowuni ihlala ifunyenwe kakuhle, ikumgangatho ophezulu. Ayikwazi ukukhusela kuphela iselfowuni, kodwa ikwanobuhle obuthile, kwaye ixabiso lisondele kakhulu ebantwini.
Ukuvuleka, ukubandakanya wonke umntu, ukuzithemba kunye nokungena ngaphakathi zizimbo zethu zomzimba, amagama kunye nezenzo zizithembiso zethu, kwaye iziphumo luvavanyo lwemigangatho yethu.